Waa sidee xaaladda dhaawac ee Leroy Sane, goorma ayuuse garoomada ku soo laabanayaa? – Gool FM
Waa sidee xaaladda dhaawac ee Leroy Sane, goorma ayuuse garoomada ku soo laabanayaa?
Haaruun September 30, 2019
(Manchester) 30 Sebt 2019. Weeraryahanka kooxda kubadda cagta Manchester City ee Leroy Sane ayaa la soo warinayaa inuu tallaabo fiican u qaaday ka soo kabashadiisa dhaawacii halista ahaa ee ka soo gaaray Jilibka, waxaana la filayaa in xiddigan reer Jarmal uu garoomada dib ugu soo laabto marxaladaha hore ee sanadka 2020-ka.
Sane ayaa garoomada ka maqnaa tan iyo markii dhaawac jilibka ah garoonka looga dhexqaaday intii lagu guda jiray kulankii ay Man City ka horjeedday Liverpool bishii la soo dhaafya ee Community Shield, 23-sano jirkaan ayaana lagama maarmaan ay noqotay inuu qalliin maro.
Xiddiga xulka qaranka Jarmalka ayaan la filaynin inuu garoomada dib ugu soo laabto illaa ugu yaraan bartamaha bisha Maarso, laakiin sida uu warinayo Wargeyska The Sun laacibkan garabka ka dheela ayaa horumar la taaban karo ka sameynaya ka soo kabsashadiisa qalliinkii uu maray.
Warbixinta ayaa sheegaysa in Sane uu horay haatan lugta ugu riixay 20kg qolka jimicsiga (GYM), halka la filayo inuu bilowga orodka iyo xasilloonida dib u bilaabo kaddib fasaxa caalamiga ah, isagoo saf ugu jira soo laabashadiisa horraanta sanadka dambe.
Kooxda Bayern Munich ayaa si xoog leh loola xiriirinayey inay soo qaataan da’yarkii hore ee naadiga Schalke 04 intii lagu guda jiray suuqii kala iibsiga xiddigaha ee xagaaga, kooxda ku guuleysatay horyaalka Bundesliga ayaana weli la sheegayaa inay xiiseynayaan u dhaqaaqistiisa.
Xaqiiqdii, Sane ayaa heshiiskiisa haatan uu ku joogo garoonka Etihad waxa uu ku eg yahay dhammaadka xilli ciyaareedka 2020-21, waxaana la rumeysan yahay inuu iska diiday fursad uu heshiis ugu kordhiyo kooxda Tababare Pep Guardiola.
Macallinka Inter Milan ee Antonio Conte oo doonaya inuu la soo wareego laacib khadka dhexe kaga ciyaara Kooxda Manchester United